Wovie TV Apk Khuphela ye Android [Iimuvi]-Luso Gamer
Ukhuphelo lwe-Wovie TV ye-Android [Iimuvi]
Ukuba udiniwe kukukhangela iqonga lokuzonwabisa lasimahla kwi-Intanethi. Apho abasebenzisi be-Android banokusasaza ngokulula iimuvi ezingapheliyo kunye nothotho lwasimahla. Emva koko sicebisa abo basebenzisi be-smartphone ukuba bakhuphe kwaye bafake iWovie TV Apk.
Ngaphandle kokubonelela ngokuzonwabisa okungenamkhawulo, ezo ziquka iimuvi, uthotho, uxwebhu, imiboniso yeTV kunye nokunye. Usetyenziso kwakhona luzisusile iintengiso ezicaphukisayo ezibonakala kakhulu kwiscreen. Ngelixa ubukele okanye usasaza iividiyo kwizikrini.
Inkqubo yofakelo kunye nokusetyenziswa kwe Imovie App ilula kakhulu. Nangona kunjalo ngokuthathela ingqalelo ukukhululeka kwabasebenzisi be-android, apha siza kukhankanya onke amanyathelo aphambili kubandakanya ulwazi. Ukonwabela iifilimu ezingapheliyo sicebisa abasebenzisi be-android ukuba bafake iWovie TV App.
Yintoni iWovie TV Apk
I-Wovie TV Apk ngumthombo ofanelekileyo wokuzonwabisa kwi-intanethi, apho abasebenzisi be-Android banakho iividiyo ezingenasiphelo. Ezo zibandakanya iimuvi kunye nochungechunge lwasimahla ngaphandle kobhaliso okanye ubhaliso. Ngaphandle koku, ababukeli banokusasaza iiDokhumenti kunye neMiboniso yeTV.
Ukusukela oko kwaqala uhlaselo lobhubhane, imfuno yolonwabo iye yanda. Isizathu kukuba abantu baxinge kwindawo enye ngenxa yomngcipheko wokwahlulwa kwezifo. Nabasemagunyeni kwezempilo bacebisa ukuba amaziko achaphazelekayo avale inkqubo nganye.
Ngenxa yentlalo, uqoqosho kunye nemfundo stud down. Ngoku abantu babambeke kwindawo enye kwaye akukho wumbi bawenza ngaphandle kokuhlala ngaphakathi kwizakhiwo zasekhaya. Kwimeko enjalo xa abantu bevaleleke ngaphakathi kumakhaya abo, baqala ukukhangela amaqonga asimahla kwi-Intanethi.
Apho banokusasaza ngokulula umxholo wevidiyo owuthandayo. Kuba amaqonga afana neNetflix, i-Amazon Prime, i-HBO kunye neDisney ifuna ukubhaliswa. Ngaloo ndlela ukuqwalasela ukufikelela okulula kunye nokukhululeka kwiividiyo apha abaphuhlisi bazisa iWovie TV Download.
ubungakanani 3.94 MB
Igama lepakheji com.wovietv.celular
Ukuba sithetha ngenkqubo yokufakela kunye nokusetyenziswa kwesicelo. Ke ilula kakhulu, abasebenzisi bokuqala bayacelwa ukuba bakhuphele ifayile ye-Apk yamva nje. Oko kuyafikeleleka ukusuka apha ngokucofa okukodwa ngaphakathi kwekhonkco lokukhuphela.
Ngoku qalisa inkqubo yokufakela kwaye yakube igqityiwe. Ngoku ndwendwela imenyu ephathwayo kwaye uqalise umxholo wesicelo. Khumbula ukuba iividiyo zifikeleleka ngokulula ukusasazwa ngaphakathi kwideshibhodi ephambili. Cofa nje kwividiyo kwaye wonwabele umxholo weprimiyamu simahla.
Iimpawu zepro ezifikelelekayo ngaphakathi kwesicelo zibandakanya isihluzo soPhando, iSikhumbuzi seSaziso sokutyhala, amacandelo atyebileyo, isidlali sevidiyo esakhelwe ngaphakathi, iDashbhodi yokuSeta ngokweSiko, iiSeva eziKhawulezayo, Uluhlu lokukhangela oluThandayo, Imibhalo engezantsi yeelwimi ezininzi kunye nokunye.
Olona kongeza luthandwa ngabasebenzisi be-Android ziiseva eziphendula ngokukhawuleza. Injongo yokongeza ezi seva zikhawulezayo kukuqinisa inkqubo yonikezelo lwedatha. Ngaphaya koko, inokulungelelanisa umgangatho wevidiyo yokulanda ababukeli besantya se-intanethi.
Ukuza kuthi ga ngalo mzuzu asikwazi ukubona iintengiso zeqela lesithathu ngaphakathi kwesicelo. Nangona kunjalo abaphuhlisi baqinisekisa ukuba abacwangcisi ukongeza nayiphi na kwezo. Ukuba uthanda ngokwenene iimpawu zepro kunye nomxholo weprimiyamu emva koko ukhuphele iWovie TV Android ukusuka apha.
Ukufakela i-app kunika iividiyo zokuzonwabisa ezingenasiphelo.
Ezo zibandakanya iimuvi, iiSeries, iTV kunye neeDocumentaries njl.
Akukho zi-IPTV ezithe ngqo ezifumanekayo ukuba uzikhethe.
Imirhumo isuswe ngokupheleleyo.
I-interface ye-App igcinwa ilula.
Uyikhuphela njani iWovie TV Apk
Xa sithethe malunga nokukhuphela inguqulelo yamva nje yeefayile ze-Apk. Abasebenzisi be-Android banokuthembela kwiwebhusayithi yethu. Kuba apha kwiwebhusayithi yethu, sinika kuphela iifayile ze-Apk eziyinyani kunye nezangempela. Ukuqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi kunye nemfihlo.
Siqeshe iqela leengcaphephe eliquka iingcali ezahlukeneyo. Ngaphandle kokuba iqela liqinisekile ngokusebenza ngokutyibilikayo, asinakuze sinikezele ngefayile ye-App ngaphakathi kwecandelo lokukhuphela. Ukukhuphela uguqulelo oluhlaziyiweyo lwe-Apk nceda ucofe kwikhonkco elinikiweyo elingezantsi.
Usetyenziso olunjalo lwesithathu lwe-android luthathwa njengomngcipheko ukuhlohla. Nangona kunjalo ukubonelela ngeefayile ze-Apk ngaphakathi kwecandelo lokukhuphela, sele sizifakile ezo zixhobo kwii-smartphones ezahlukeneyo. Emva kokufaka i-app asizange sifumane nayiphi na ingxaki ngqo ngaphakathi.
Apha kwiwebhusayithi yethu, sele sabelane ngobuninzi bezinye izicelo ezinxulumene nokuzonwabisa. Ezifumaneka simahla kwaye azifuni mrhumo wokubukela iimuvi kunye nothotho. Ukonwabela ezinye iiapps nceda ulandele amakhonkco. Ezizi Umdlali weHDO Apk kwaye Ifilimu yeFlix yeTV Apk.
Yiyo loo nto ubambeke kwindawo enye ngenxa yengxaki yobhubhani yangoku kunye nokukhangela umatshini wokubulala ixesha. Ke abo basebenzisi be-smartphone kufuneka bafake iWovie TV Apk. Oko kuyafikeleleka ukufikelela ukusuka apha ngokhetho olunye lokucofa.
iindidi ukonwatyiswa, apps tags Iimuvi App, Wovie TV Android, Wovie TV Apk, Wovie TV App, Wovie TV Khuphela Post yokukhangela
Ukhuphelo lwe-SplikTV ye-Apk ye-Android [iMovie+Uthotho]